बलिउड Archives - Page 15 of 15 - www.kchhakhabar.com
चलचित्रको ‘हिरो’ भन्ने बित्तिक्कै अग्लो, हट्टा–कट्टा, सुन्दर, प्रभावशाली आवाज भएको कुनै व्यक्तिको छवि आउँछ । यस्तो छवि दिमागमा आउनु अस्वाभाविक कुरा पनि होइन, किनभने अहिलेसम्म विश्वकै चलिचित्रमा जमेका अभिनेता वा नायकहरुको हुलिया यस्तै नै छ । तर, यीं आम रेकर्ड तोड्दै बंगलादेशी ‘हिरो अलोम’ देखापरेका छन् । उनी हेर्दा होचो कदका ख्याउटे व्यक्ति छन् । सामान्यभन्दा बढी नै श्यामवर्णका छन् । न त उनी हिस्...
अनुष्काको खुलासाः ‘ए दिल हे मुश्किल’ मा करनले गलत तरिकाले छुन्थे
बलिउड नायिका अनुष्का शर्माले फिल्म ‘ए दिल हे मुश्किल’ का निर्माता–निर्देशक करन जोहरविरुद्ध यौनहिंसा गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्ने सोच बनाएको बताइन् । करनले उनलाई निकै नराम्रो तरिकाले छुने गरेको आरोप लगाएकी छिन् । अनुष्काले यो खुलासा उनकै च्याट शो ‘कफी विद करन’ मा गरेकी हुन् । – करनको कार्यक्रममा अनुष्का कट्रीना कैफसँग पुगेकी थिइन्, जो उनको खुलासा पछि द्वीविधामा भएको देखिइन् । – कट्रिनाले य...
आमिर खानको फिल्म ’दंगल’को बक्स अफिसमा धमाका, तीन दिनमा सय करोड माथी
वलिउड स्टार आमिर खान स्टारर फिल्म ’दंगल’ले तीन दिनमा नै सय करोड बढिको विजनेस गरेको छ । पहिलो दिन २९ करोड ७८ लाखको विजनेस गरेको फिल्मले दोश्रो दिन ३४ करोड ८२ लाख र तेश्रो दिन ४२ करोड ३५ लाखको विजनेस गर्यो । क्रिसमसको छेउमा प्रदर्शनमा आएको फिल्मले आईतबार सार्वजनिक विदाको फाईदा उठाउँदा तीन दिनको कलेक्सन १ सय ६ करोड ९५ लाख पुगेको छ । समिक्षकबाट फिल्मले उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पाएको छ । वर्ड अफ माउथ ...
बलिउडमा सर्वाधिक पढेलेखेका ७ नायक नायिकाहरु
एजेन्सी , विश्वमै सर्वाधिक फिल्म निर्माण हुने फिल्म उधोगमा पर्दछ बलिउड । बलिउडमा निकै पढे लेखेका कलाकारहरुको पनि बोलवाला रहेको पाइन्छ । कहिलेकाही बलिउडमा अंग्रेजी बोल्न नआएका कारणपनि कलाकारहरुलाई अपमानित गरिएको खबर मिडियामा आउने गरेको छ ।त्यही बलिउडमा धेरै पढेका कलाकार यस्ता छन् । अमिताभ बच्चन शताब्दीका महानायक तथा बलिउडका बिग बी साइसमा डिग्री गरेका छन् । अस्ट्रेलियाको किन्सल्याण्ड यूनिवर...
बिहे अघि नै एउटै होटलमा रणवीर–दीपिका बस्नुको कारण पर्दाफास
एजेन्सी । बलिउडमा निर्देशक तथा निर्माता सञ्जयलीला भन्सालीलाई ‘रिसाहा’ निर्देशकका रूपमा चिनिन्छ । कामको समयमा अरू केही कुरा सुन्न नचाहने भएकाले पनि उनीसँग काम गर्दा धेरै अभिनेता तथा अभिनेत्री सचेत हुन्छन् । अब यही कुरा अभिनेता रणवीर सिंह र अभिनेत्री दीपिका पादुकोणमा पनि लागू भएको छ । अहिले यी दुई फिल्म ‘पद्मावती’को सुटिङमा व्यस्त छन् । फिल्ममा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका यी दुई सुटिङ स्पट अत्यन्...
यसरी किन चिच्याइन् आलिया एयरपोर्टमा
एजेन्सी- एयरपोर्टमा आलियाको हात एक युवकले समात्न खोजेपछि चिच्याएकी छिन् । सुटिङका लागि भारतको जोधपुर पुगेकी आलिया सुटिङ सकेर मुम्बई फर्कने क्रममा एक युवकले आलियाको हात समात्न कोसिस गरे । युवकको त्यस्तो व्यवहार देखेपछि आलिया बेस्सरी चिच्याएको बताइएको छ । आलिया मुम्बई फिर्ता हुनका लागि एयरपोर्ट पुगेपछि त्यहाँको भीड देखेर उनी केही समयसम्म गाडीबाटै निस्किएकी थिइनन् । सेक्युरिटी गार्डले घेरा बनाए...
ताइमुर अलि खान पतौदी” जन्मदै बिबादको सीकार
चर्चीत बलीउड अभीनेत्री करीना कपुर र नायक सेफ अली खान का पहीलो सन्तान का रुपमा जन्मीएका ताइमुर अलि खान पतौदी को ताइमुर नामकरण गरीएका कारण सामाजिक संजालममा उनी एकाएक बिबादको शिखरमा पुुगेका हुुन । किन बिबादित बन्यो ताइमुर नाम ताइमुर नामको मतलब अरबी भाषामा लाम हुन्छ तर आममानसमा तिमूर जो १३९८ मा दिल्ली कब्जा गरे , जीनोसाइडका प्रयोग गरी १०,००० मानीस मारेका थिए यस कारण ताइमुर तिमूरसुन्दा उस्तै भए...
बुधबार, पौष ०६, २०७३
करिश्मासँग प्रेममा परेका यी विवाहित पुरुष को हुन् ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री करिश्मा कपुर उनका नयाँ प्रेमीका कारण चर्चामा छिन् । कुनै बेलाकी हिट अभिनेत्री भएपनि अहिले बलिडमा निष्क्रिय जस्तै रहेकी करिश्माको केही समय अघी मात्र पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो । तर सम्बन्ध विच्छेदको एक वर्ष पनि नवित्दै करिश्मासँग नयाँ पुरुषसँग लिभइन सम्बन्धमा बस्न थालेपछि उनको चर्चा चुलिएको हो । उनका नयाँ ब्वाइ फ्रेण्ड सन्दीप तोशनीवाल रहेको बताइएको छ । उनीहरु मुम्बइक...
मंगलबार, पौष ०५, २०७३
फिल्म रिलिज पूर्व नै ’दंगल’ ले राख्यो रेकर्ड
१ पुस, एजेन्सी । आमिर खान स्टारर फिल्म ‘दंगल’ को स्याटेलाइट राइट्स को डिल ७५ लाख भारुमा तय भएको छ । यसलाई बलिउडकै सबैभन्दा ठूलो स्याटेलाइट डिल बताइएको छ। यो सम्झौता जी नेटवर्कसंग भएको हो । यो भन्दा अघि सन् २०१३ मा आमिरकै ‘धूम ३’ को स्याटेलाइट अधिकार सबैभन्दा महंगोमा बिकेको थियो। तब सोनी च्यानलसंग ६५ करोड भारुमा डिल भएको थियो। ‘दंगल’ २३ डिसेम्बरमा रिलिज हुनेछ। किन चर्चमा छ यो सम्झौता? बलिउडम...